Ny tatitry ny WTTC vaovao dia manome tolo-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'ny Travel & fizahan-tany aorian'ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Ny tatitry ny WTTC vaovao dia manome tolo-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'ny Travel & fizahan-tany aorian'ny COVID
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Cruising • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Theme Parks • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Julia Simpson, filoha & CEO an'ny WTTC
Araka ny tatitra, ny governemanta sy ny toerana itodiana dia tokony hampiasa vola sy hisintona famatsiam-bola avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny sehatra toy ny fotodrafitrasa ara-batana sy dizitaly, ary koa amin'ny sehatry ny dia toy ny fahasalamana, fitsaboana, MICE, maharitra, traikefa, kolontsaina na lasibatra - ao anatin'izany ny vehivavy , LGBTQI, ary azo idirana - fizahan-tany.
Ny sehatra fitsangatsanganana sy fizahantany manerantany dia nijaly mihoatra ny hafa noho ny fameperana mafy ny fivezivezena.
Ny fandraisan'anjaran'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ho an'ny harinkarena faobe manerantany dia nidina hatramin'ny $ 9.2 trillion tamin'ny 2019 lasa $ 4.7 trillion tamin'ny taona 2020 ihany.
Ny fidiram-bola dia nidina hatramin'ny $ 986 miliara tamin'ny taona 2019 ka lasa $ 693 miliara monja tamin'ny taona 2020.
Ny World Travel & Tourism Council (WTTC) dia nanangana androany tatitra vaovao manan-danja izay manome tolo-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'ny governemanta sy ny toerana itodiana, satria mikasa ny hanangana sy hampitombo ny sehatry ny Travel & fizahan-tany izy ireo.
Miaraka amin'ny areti-mandringana mahatonga ny dia iraisam-pirenena hijanona saika tanteraka, ny sehatry ny fitsangatsanganana sy fizahantany manerantany dia nijaly kokoa noho ny hafa noho ny fameperana mafy ny fivezivezena.
Ny fandraisana anjaran'ity sehatra ity amin'ny harinkarena faobe manerantany dia nidina hatramin'ny $ 9.2 trillion tamin'ny taona 2019, ka lasa 4.7 trillion monja tamin'ny taona 2020, maneho fatiantoka efa ho US $ 4.5 trillion. Ankoatr'izay, rehefa namaky ny valan'aretina ilay valanaretina, 62 tapitrisa ny asa fitsangantsanganana sy fizahantany very nefa maro no mbola tandindomin-doza.
Ny tatitra dia nanambara fa ny fampiasam-bola dia nihena sahabo ho ny iray ampahatelony (29.7%) tamin'ny taon-dasa, nidina hatramin'ny $ 986 miliara tamin'ny taona 2019, lasa US $ 693 miliara fotsiny tamin'ny taona 2020 ary ankehitriny, rehefa miroso amin'ny fanarenana isika, ny fampiasam-bola amin'ny Travel & fizahan-tany dia tsy nitsikera toy izany mihitsy.
izany WTTNy taratasy C dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny tanjona sy ny governemanta hanintona ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny tontolo iainana mahomby, ao anatin'izany ny fanentanana toy ny hetra marani-tsaina, ny politika amin'ny fanamorana ny dia, ny fanamorana, ny fampidirana ny fahasalamana sy ny fahadiovana, ny fifandraisana mahomby ary ny mpiasa iray mahay sy mahay.
Ity tatitra ity dia manolotra tolo-kevitra lehibe ho an'ny governemanta sy ny toerana itodiana ary manasongadina ireo fizarana ireo izay mety mahasarika ny mpampiasa vola indrindra.
Jean-Marie Delort hoy:
September 17, 2021 ao amin'ny 04: 11
Vanim-potoana vaovao sy folo taona vaovao! Miova izao tontolo izao ary tokony hifanaraka amin'ireo fanovana ireo isika. Mampalahelo fa tsy ny governemanta rehetra no manaraka ny fironana. Ireo mpitsangatsangana dia mitady ny fikarohana 3S, teo aloha dia ny Ranomasina, Masoandro ary ny Serivisy ary mitsiky ankehitriny, azo antoka, maharitra.